Cunto Cunto ah oo Cunna ah oo Cunto Cake ah oo Lagu Sameeyay Qaboojiye Farmaaj - Keega
Cake Apple Spice Cake
Cunto khudradeed oo qoyan oo tufaax ah oo lagu carfeeyay xabo, lowska, qorfaha iyo la shiilay kareemka farmaajada qabow
Tani karinta keega tufaax i qarxi! Qaniin kasta waxaa loo carfayey samada tufaaxa. Isku dar ah farmaajo barafoobay , oo lagu kariyey guri-guri karamell faleebo , Ma aanan dooneyn inaan joojiyo cunista!
Kani waa keeggii ugu horreeyay ee keeg ee aan abid ukumo aad u yar sameeyey! Waxaan maqli jiray in tufaaxdu samayso ukumo badalaad wanaagsan laakiin waan ka shakisanahay. Waan ku faraxsanahay inaan soo sheego keeggan waa mid aad u qoyan, wuxuu leeyahay qaab fiican iyo dhadhan fiican! Cuntadani keegga ah waxay isticmaashaa keliya hal ukun iyo saliid ka yar cuntooyinka kale sidaa darteed waa ikhtiyaar caafimaad haddii aad isku dayeyso inaad yareyso dufanka.
sida loo sameeyo strawberries muddo dheer oo khal
Keegga tufaaxdu ma u dhadhamiyaa sida tufaaxa?
Markii ugu horreysay ee aan tijaabinayay cunto karinta wanaagsan ee tufaaxa, waxaan ku wareersanaa in keegga tufaaxu yahay inuu u dhadhamo sida tufaaxa iyo in kale.
Waxyaabaha qosolka badan ayaa ah, Uma maleynayo inaad xitaa sheegi kartid inay ku jiraan tufaax keeggan. Keegga ayaa inta badan dhadhamiya sida moofo udgoon laakiin moorey ah. Taasi waxay ka timid tufaaxa! Marka ha ka fileynin qaabkan keegga tufaaxa ah inuu u dhadhamo sida tufaaxa, kaliya wuxuu u dhadhamayaa sida diiran, keega udgoon ee raaxada leh! Taas oo aan ahayn wax xun!
Maxaad ugu isticmaashaa khudradda tufaaxa dubista?
Tufaaxa (Applesauce) waxaa lagu dari karaa keeggaaga beddelka 1: 1 ee saliidda ama subagga dhalaalay . Tani waxay yareyneysaa wadarta guud ee dufanka iyo kalooriyada ku jirta cuntadaada haddii aad rabto nooc kafiican oo keegaaga ah adigoon qoyaan lumin.
Sidoo kale waad sameyn kartaa badal qaar kamid ah ukuntaada adoo adeegsanaya tufaax . U isticmaal rubuc koob oo tufaax aan macaaneyn halkii hal ukun ah. Xaqiiqdii waan yareeyay tirada ukunta ku jirta qashinkan sababtoo ah tufaaxa lagu daray.
Ma isticmaali kartaa miraha tufaaxa ee dukaanka lagu iibiyey mise waa inaan ka dhigaa mid cusub?
Waad isticmaali kartaa midkoodna tufaax macmacaan ah oo aan macaaneyn oo guriga lagu sameeyo ama tufaaxa dukaanka lagu iibiyey. Sonkor-la’aan ayaa laga door bidaa si aad u xakameyso macaanka keega. Haddii aad xiiseyneyso inaad barato sida loo sameeyo tufaaxadaada, waa wax fudud!
Markii aan koray, sanad walba waxaan samayn jirnay tufaax oo waan qasacadaysan jirnay. Waxaan dhawaan weydiistey Aabahey isla qalabkii aan adeegsan jirnay markii aan yaraa in aan ku sameeyo tufaax. Waxay ahayd foosha waallida ah ee miiska is dul saartay. Waxaan maalin ku qaadan laheyn inaan soo qaadanno tufaax, jarjarayno oo karineyno intaanan ku shubin mashiinka kala saari lahaa maqaarka iyo abuurka ka soo baxa jilitaanka tufaaxa jilicsan.
Markaa waxaan kari karnaa miraha tufaaxa si aan sannadka oo dhan u haysanno. Waxaan xasuustaa qaar badan oo hilib doofaar ah oo lagu adeegi jiray tufaaxada guriga lagu sameeyo.
Sida loo sameeyo keega lakabka tufaaxa
Waligaa ma samayn keeg kahor? Daawo kan “ Sida loo sameeyo keegaaga ugu horreeya ”Casharro daboolaya wax kasta oo ka mid ah dubista, dhaxanta, buuxinta iyo helitaanka geesaha siman.
Ka dib markaad dubto lakabyada keegaaga, waxaad dooneysaa inaad u ogolaato inay qaboobaan. Waxaan u daayay qaboojiyaha weelkeyga ilaa 15 daqiiqo ka dib waxaan u soo bixiyaa sariir qaboojiye si aan u sii qaboojiyo.
Markey keegyadeydu si diiran u kululaadaan, waxaan ku duuduubaa bac balaastig ah oo waxaan geliyaa qaboojiyaha muddo saacad ah si aan u gooyo keega oo aan isla markiiba u buuxiyo.
Marka aan samaynayo tayda keega vanilj ama keeg kale oo midab khafiif ah leh, waxaan ka goynayaa qubbada iyo geesaha bunni laakiin sida iska cad, keegga noocan ah, maahan inaad taas sameyso. Kaliya iska jar qubbada si aad uga dhigto lakabbadaada mid fidsan ka hor intaadan ku buuxin barafkaaga.
Keeggaygu waa buuxiyey oo dhaxan kulahaa farmaajo barafoobay laakiin subag bunni ah sidoo kale dhadhamin lahaa cajiib ah!
sida loo sameeyo shukulaatada ganache oo dhalaalaya
Waxaan go'aansaday inaan si fudud ula socdo qaabka keegga oo aan sameeyo lakab wanaagsan oo jilicsan oo jiis ah oo qaboojiya oo aan sameeyo maraqa karamell .
Waxaan kulahaa xoogaa karaamel ah haraaga qaboojiyaha sidaa darteed waan xoogaa diiriyay (ma ahan kuleyl!) Oo waxaan galiyay dhalo balaastik ah si aan ugu shubo dareereyda.
Ka dib waxaan ku dhergay keegga xoogaa dollops aad u fudud oo ah buttercream anigoo isticmaalaya caarada Wilton # 32 laakiin waxaad isticmaali kartaa caarada aad jeceshahay!
Keeggan tufaaxani wuxuu ahaa mid si weyn loogu garaacay gurigeenna! Qaniinyo kasta oo ugu dambaysay ayaa la cunay! Keeggu waa mid qoyan oo si fiican isugu dheellitiran dhaldhalaalka jiis baraf ah!
goorta la mariyo jalaatada
Miyaad u adeegsan kartaa cuntadan keegga tufaaxa ah ee keega la duubay?
Xaqiiqdii waad u adeegsan kartaa cuntadan keegga tufaaxa ah ee keega la dubay. Waxay leedahay jajab adag oo adag oo xoog leh oo kufiican hoosta subagga iyo jacaylka.
Waan jeclahay sida wanaagsan ee jilicsan ee jajabka ahaa! Ii sheeg tani inaysan afkaaga biyo ka dhigayn!
Miyaad tan uga dhigi kartaa buskudka lagu kariyo tufaaxa?
Waad u rogi kartaa cuntadan macmacaanka tufaaxa adigoo ka tagaya saliida. Kuleyli foornadaada ilaa 400ºF. Buuxi shaashaddaada keega ah 2/3 jidka oo buuxa. Waxaan jeclahay inaan isticmaalo qaadada jalaatada yar. Kokkiskaaga ku kari ilaa 5 daqiiqo 400ºF ka dibna hoos u dhig heerkulka 350 toF. HA FURIN SAMATADA. Furitaanka foornada waxay sababi kartaa keeggaaga keega inuu yaraado.
Dubo ilaa 10-15 daqiiqo oo dheeri ah ama ilaa qotomiska la dejinayo. U oggolow keegagga in ay qaboobaan ka hor inta uusan dhaxan.
Ma rabtaa dhadhamin badan oo dhicitaan ah? Fiiri kuwan!
Cake Pickkin Spice Cake Oo Lagu Dareynayo Qaboojiye Farmaaji
Cananaaska Karootada Cake Oo La Dareemayo Farmaajada Farmaajada
Keeg udgoon oo dhadhan fiican leh oo lagu sameeyey tufaax sidaa darteed waa mid qoyan! Qaboojiyey farmaajada barafoobay! Cuntadani waxay ka dhigeysaa dufan ku filan seddex 6'x2 'wareegyo keeg ah ama labo wareega 8'x2' ah. Waqtiga Diyaarinta:shan iyo toban daqiiqado Waqtiga karinta:35 daqiiqado Kalori:244kcal
Waxsoosaarka Cake ee Applesauce
▢4 oz (113 g) subag aan cusbo lahayn jilcisay
▢10 oz (283 g) sonkorta granulated
▢3 oz (85 g) saliid
▢1 weyn (1) ukunta heerkulka qolka
▢10 oz (283 g) bur keeg
▢1/8 tsp (1/8 tsp) toon ah
▢1/4 tsp (1/4 tsp) lowska
▢1/4 tsp sinjibiil dhulka
▢1 1/2 tsp (1 1/2 tsp) qorfe
▢12 oz (340 g) tufaax aan macaaneyn
▢16 oz (454 g) farmaajo jilcisay
▢8 oz (227 g) subag aan cusbo lahayn jilcisay
▢1 tsp liin dhanaan
▢36 oz (1020 g) sonkorta budada ah
▢# 32 Talo Bixinta Wilton
▢Boorsada Tuubada ama Dhalada
Tilmaamaha Cake Applesauce
Kuleyli foornada ilaa 350º F / 176º C. Diyaarso digsiyadaada keega ama wax kale oo la sii daayo.
Si wada jir ah ugalaab bur, soodho, xawaash iyo milix.
Weelka baaqigaaga qaso, kareemka subagga ilaa inta uu kafiicmayo lifaaqa buskudka.
Ku saydh sonkorta kuna karbaasha dusha sare illaa caddaan iyo qalafsanaan (2-3 daqiiqo). Saliidaada ku dar oo karbaash daqiiqad kale.
U wareeji lifaaqa galka. Ku dar ukunta iyo vaniljiga oo isku dar ilaa inta la isku darayo.
Kudar isku darka burka iskuna qas ilaa inta uun la dhexgalinayo, ha ka badsan isku darka!
Ugu dambeyntii, ku dar tufkaaga tufaax ah oo isku qas ilaa wax walba la isku daro.
U qaybi baytarka si siman inta u dhexeysa digsiyada la diyaariyey. Ku jilciso dusha sare leh spatula caag ah. Keega duba ilaa ay ku adkeystaan ​​bartamaha oo caday ka soo baxo isagoo nadiif ah ama xoogaa jajab ah dul saaran yihiin, qiyaastii 25-35 daqiiqo.
Tilmaamaha barafka barafka
Dhex dhig subagga jilicsan ee weelka dhajiskaaga istaagga leh ku dheji lifaaq iyo kareem hoose illaa inta uu ka siman yahay. Ama waxaad isticmaali kartaa qalabka wax lagu qaso!
Dhig farmaajada jilicsan ee baaquli baaquli subagga qaybo yaryar oo isku walaaq hoose illaa inta ay siman yihiin oo la isku darayo
Kudar liintaada laga soo saaray iyo milixda. Ku dar sonkorta budada ah ee la sifeeyay hal koob markiiba oo isku dar ilaa inta la isku darayo
U adeegida:1g|Kalori:244kcal(12%)|Kaarboohaydraytyada:28g(9%)|Protein:1g(laba%)|Dufan:shan iyo tobang(2. 3%)|Dufan Dufan:6g(30%)|Kalastarol:3. 4mg(kow iyo toban%)|Sodium:209mg(9%)|Kaliumperyamper:26mg(1%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:26g(29%)|Vitamin A:264IU(5%)|Vitamin C:1mg(1%)|Kaalshiyam:9mg(1%)|Bir:1mg(6%)
cunto kariye aad u qoyan oo xoqan
sida loo sameeyo cake chantilly
jay z iyo beyonce hees cusub